IRoyal Site yaseAranjuez nezingadi zayo ezinhle | Izindaba Zokuhamba
I-Aranjuez Kusukela ngesikhathi seReconquest, kwakuyimpahla ye-Order yaseSantiago, amakhosi ayo amakhulu ayenesigodlo lapha esizeni sanamuhla ngenxa yobukhazikhazi bendawo yayo nobumnene besimo sezulu sayo. Ngenkathi amaKhosi amaKhatholika enikeza inkosi indima kaGrand Master waseSantiago, u-Aranjuez wahlanganiswa noMqhele. Leli thafa elivundile lapho kuhlangana khona iTajo neJarama, ngokuhamba kwesikhathi kwaba yi indawo yokuhlala engabalulekile yomndeni wasebukhosini waseSpain.
AbakwaHabsburg bafuna ukwenza i-Aranjuez idolobha elikhulu eliphefumulelwe e-Italiya futhi ubukhosi bakwaBourbon busize ekwakheni ubukhazikhazi beRoyal Site, lapho bachitha khona yonke intwasahlobo kwaze kwafika uJulayi. Kungakho lokhu edolobheni eningizimu yeMadrid Yaduma ngesigodlo sayo esihle nezingadi ezintekenteke, ezivakashelwa yizinkulungwane zabavakashi abavela kuwo wonke umhlaba minyaka yonke.
1 Umlando weRoyal Site yase-Aranjuez
2 Isitayela se-Aranjuez Palace
3 Ingaphakathi lesigodlo sase-Aranjuez
4 Yiziphi ezinye izindawo ongazivakashela e-Aranjuez
Umlando weRoyal Site yase-Aranjuez
UMbusi uCarlos V wanquma ukwenza leli fa libe yindawo enkulu ephefumulelwe yase-Italiya, umklamo owaqhubeka nendodana yakhe uFelipe II ekufeni kwakhe, owayalela ukwakhiwa kwesigodlo esisha esizeni lapho kwakukhona khona amakhosi e-Order of Santiago . Kukweleta ukwakhiwa kwayo nguJuan Bautista de Toledo (owenza ukwakheka kwemigwaqo ebiyelwe izihlahla ehlela insimu ebekelwe izingadi nezitshalo) noJuan de Herrera.
AmaBourbons anikele ekuthuthukiseni ubukhazikhazi balesi Sigodlo. UFelipe V wahlela izingadi ezintsha noFernando VI ukwakheka kwemigwaqo enezingodo eziningi. Ngo-1775 uCarlos III wayala ukuthi kwakhiwe amanye amaphiko amabili esigodlweni futhi idolobha elisha lafinyelela ekuthuthukisweni kwalo okuphelele ngaphansi kokubusa kukaCarlos IV. Amakhosi uFernando VII no-Isabel II baqhubeka nokuvakashela i-Aranjuez phakathi nentwasahlobo, ngakho-ke ubukhazikhazi bobukhosi beNdlu yase-Aranjuez bahlala kwaze kwaba ngu-1870.
Isitayela se-Aranjuez Palace
IRoyal Palace eyakhiwe nguFelipe II esizeni sesigodlo esidala seMasters of Santiago yaqala ngo-1564 futhi yakweletwa ukwakhiwa kwayo nguJuan Bautista de Toledo noJuan de Herrera, owaqeda ingxenye yayo kuphela. Yize legcwele izici zangempela ze-Renaissance Ngokusondela kwayo, isigodlo sase-Aranjuez yisici se-classicism yamaHabsburgs ngokushintshanisa itshe elimhlophe nezitini.
Uhlelo lokuqala lwaqhutshwa nguFelipe V de Borbón ngo-1715 futhi lwaphothulwa nguFernando VI ngo-1752 kulandela izinhlelo uJuan Bautista de Toledo ayezitholile futhi ezazithatha amakhulu amabili eminyaka ukuba ziqedwe. Kodwa-ke, isigodlo sase-Aranjuez sahlala sinjalo iminyaka engamashumi amabili, kusukela ngo-1775 UCarlos III wayala ukuthi kungezwe amanye amaphiko amabili.
Ingaphakathi lesigodlo sase-Aranjuez
Uma kwenzeka ufuna ukuvakashela ingaphakathi lesigodlo sase-Aranjuez, amathikithi kumele athengwe esigodlweni uqobo. Amanani ancike ekutheni ukuvakasha kuyaqondiswa noma cha. Ngikweluleka ukuthi ukhethe inketho yokuqala ngoba umhlahlandlela wezokuvakasha onguchwepheshe uzokutshela umlando weRoyal Site yase-Aranjuez futhi uzokwazi nokuthola amakamelo azimele amakhosi neMuseum of Faluas ngama-euro angama-15 kuphela. Ngakolunye uhlangothi, Uma ukuvakasha kumahhala, ukungena kuzokubiza kuphela i-9 euroYebo, kepha uzokuphuthelwa konke okungenhla.
Ngaphakathi esigodlweni uzokwazi ukucabanga imidwebo yaseFlemish, imidwebo nefenisha yenani elingenakubalwa futhi ngaphandle uzokwazi ukujabulela izingadi ezinhle lapho ubukhosi nobukhosi baseSpain bahamba khona emakhulwini eminyaka adlule. Ukutholakala kuzo kumahhala.
Yiziphi ezinye izindawo ongazivakashela e-Aranjuez
Indlu Yasebukhosini yeLabrador
Njengoba kwakunguCarlos IV waseBorbón iNkosana yase-Asturias, ama-pavilion e-pier Ferdinand VI asetshenziswa njengendlu yokuzithokozisa futhi i-Garden of the Prince yadalwa endaweni ezungezile. Ngenkathi ekhuphukela esihlalweni sobukhosi, wanquma ukwakha emaphethelweni aphambene nalezi zingadi indlu entsha yezwe ebizwa nge-del Labrador, enezingqimba zayo ezinesizotha ukuthi kwasekuqaleni zazihloselwe ukuqhathanisa nokunethezeka kwangaphakathi kwayo. Ukuhlobisa ikakhulukazi kungenxa yomklami wangaphakathi uJean-Démosthène Dugourc nethonya laseFrance nelase-Italy liyabonakala. Isitayela se-Empire yisona esivela kakhulu.
I-Real Casa del Labrador yakhiwa ngumdwebi omkhulu uJuan de Villanueva nomfundi wakhe u-Isidro González Velázquez, abanye bakhe abangaphakathi bakhe abakweleta yena.
Ngo-2001 lalibhalwe njengo Amagugu Emhlaba, kanye nezinye izindawo zomlando nezobuciko zedolobha, ezibhalwe ohlwini lwe-Unesco ezinegama leCultural Landscape yase-Aranjuez. Ukuvakasha kwakho kuvunyelwe, kusuka emahoreni asunguliwe.
Ezinye izakhiwo ezithakazelisa kakhulu ukuvakashela e-Aranjuez ziyi isigodlo saseMedinaceli, i-House of Trades and Knights, i-House of Employees, iSonto LaseSan Antonio, iPlaza de Toros, iMercado de Abastos noma iSibhedlela saseSan Carlos.
Izingadi zeNkosi, isiQhingi, iParterre neNkosana
UFelipe II, umthandi omkhulu wezingadi, wenza umzamo okhethekile wokuhlobisa u-Aranjuez. IGarden of the Island, edwetshwe ngumdwebi wezakhiwo uJuan Bautista de Toledo, naleyo yeNkosi eseduze nesigodlo futhi umhlobiso wayo wamanje ngenxa kaFelipe IV igcinwe kusukela ngesikhathi sayo.
Futhi kulesi siqhingi, imithombo eminingi ingenxa kaFelipe IV, yize amaBourbons aqhubeka nokumcebisa ngemininingwane efana namabhange kaCarlos III.
UFelipe V wengeze ezingadini ezikhona iParterre phambi kwesigodlo kanye nokuphela ekugcineni kweNsimu yesiQhingi, ebizwa nge-Isleta, lapho afaka khona uMthombo WamaTritoni u-Isabel II ayewulethe eCampo del Moro.
Insimu yeNkosana ibizwa ngegama layo nokudalwa kwayo yindodana kaCarlos III okwathi ngeminyaka yama-1770 waqala ukusebenzisa isigubhu esidala sikaFerdinand VI njengendawo yokuzilibazisa nokwakha ingadi ngendlela yase-Anglo-French ezungeze yona ethonywe ngqo izingadi zikaMarie Antoinette ePetit Trianon.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Indawo Yasebukhosini yase-Aranjuez nezingadi zayo ezinhle